August 2020 - Page2of 22 - Nalonetardiary
ယာဥ္ ေရာင္းမွား/၀ယ္မွာ မျဖစ္ေစရန္နဲ႕ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် အစီအရင် -ဆရာ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းယတြာကောင်း တစ်ခုမျှဝေပါရစေ။ ယာဉ်စီးနေရင်း တိုက်မိသလိုခဏခဏဖြစ်နေသူများ၊ နမိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူများ၊စက်ပစ္စည်းနှင့်ကံမဆပ်သူ၊ ယာဉ်အဝယ်မှား၍ ခဏခဏပြင်နေရပါသလား? -အောက်ပါယတြာကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေများရဲ့ အခက်အခဲများအဆင်ပြေသွားမည်ဆိုပါက ဆရာစေတနာ ယတြာတင်ပေးရကြိုးနပ်ပါတယ်။ ဤယတြာကို အင်္ဂါနေ့ ည(၇)နာရီမှ(၉)နာရီ (သို့)စနေနေ့ နံနက် (၆)နာရီမှ နံနက်(၉)နာရီအတွင်း စီရင်ရပါတယ်။ -သံပုရာသီးတလုံးပေါ်တွင် ဆော့ပင်ဖြင့်” ဓ”အက္ခရာရေးပါ။ -နွားနို့ကိုကျိုချက်၍ အနွေးခံအောင်ထားပါ။ -ထိုနွားနို့ထဲတွင် သံပုရာသီးကိုထားပါ။ -ထို့နောက် လက်ညိုးဖြင့် နွားနို့ကိုမွှေရင်းအောက်ပါဂါထာကို “သိဒ္ဓိသိဒ္ဓိမဟာသိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိအပေါင်း ထောင်းထောင်းထပါစေ” ဟူ၍ (၉)ခါမွှေ (၉)ခါပြောပါ။ -သံပုရာသီးကို အဝတ်စ အနီ (သို့) အနက်ဖြင့်ထုတ်၍ မိမိစီးသော ယာဉ်တွင်ဆောင်ထားပါ။ (သံပုရာသီးပုပ်သွားခြင်း ခြောက်သွားပါက ဤယတြာကိုအသစ်တဖန်ပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ထားရပါမည်) -နွားနို့များကို အောင်သပြေ ၃ညွှန့်ဖြင့် ” … Read more
Categories Horoscropes Tags ယာဥ္ ေရာင္းမွာ
ကိုယ္တြင္းကအ႐ိုးနာ၊ အ႐ြတ္နာ၊ ႂကြက္သားနာ တာေတြကို ၃-၄ ရက္အတြင္း သက္သာေစတဲ့နည္း ..
” ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာ၊ ကြွက်သားနာ တာတွေကို ” ဆားမီးလှော်အပူလေးနဲ့ကြပ်ပူထိုးရင်ပျောက်ပါတယ်။ ဆားလက်တဆုတ်ကိုအိုးထဲထည့်လှော်ပါ။ အငွေ့ထွက်ပြီးပူလာရင် အဝတ်လေးထဲထည့်ထုပ်ပါ။ ပြီးရင်နာတဲ့နေရာကိုဖိဖိတို့ပေးပါ။ သက်သာရာကနေ ပျောက်ကင်းမှာပါ။ ၃-၄ ရက်တော့ဇွဲထားလုပ်ပေးပါ။ Grace Tun Shein Zawgyi ” ကိုယ္တြင္းကအ႐ိုးနာ၊ အ႐ြတ္နာ၊ ႂကြက္သားနာ တာေတြကို ” ဆားမီးေလွာ္အပူေလးနဲ႔ၾကပ္ပူထိုးရင္ေပ်ာက္ပါတယ္။ ဆားလက္တဆုတ္ကိုအိုးထဲထည့္ေလွာ္ပါ။ အေငြ႕ထြက္ၿပီးပူလာရင္ အဝတ္ေလးထဲထည့္ထုပ္ပါ။ ၿပီးရင္နာတဲ့ေနရာကိုဖိဖိတို႔ေပးပါ။ သက္သာရာကေန ေပ်ာက္ကင္းမွာပါ။ ၃-၄ ရက္ေတာ့ဇြဲထားလုပ္ေပးပါ။ Grace Tun Shein
Categories Hearth Tags အရိုးနာ
အသားအေရ ၾကည္လင္ေစၿပီး အမာ႐ြတ္ေတြေပ်ာက္ေစမယ့္ ဂ်ီးခြၽတ္ ေပါင္းတင္နည္း (၅)မ်ိဳး
အမာရွတ်တွေပျောက်ပီး အသားအရေ ကြည်လင်လာစေမယ့် ဂျီးချွတ် ပေါင်းတင်နည်း (၅)မျိုး အမာရွတ် တွေဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အကျည်းတန် စေပါတယ် ။ ဒီလို အမာရွတ်တွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ထဲမှာ ဂျီးချွတ်ခြင်း ဟာလည်း ထိရောက် တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျီးချွတ် ခြင်းဖြင့် ဆဲလ်သေတွေ ကွာကျပြီး ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေ တာကြောင့် အသားအရေကို စိုပြည်ပြီး ကြည်လင် ဝင်းပ နေစေပါတယ် ။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကတော့ အရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်လေး ပြုလုပ် ပေးသွားရင် သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို … Read more
Categories Beauty Tags ပေါင်းတင်နည်း
ဆား(သို့မဟုတ်) ဆားငံရည်ဖြင့် ဘာလို့ ပလုတ်ကျင်းခိုင်းရတာလဲ ..
ဆားငန်ရည်နဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ ဆားငန်ရည်ဆိုတာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးဝါးတစ်လက်ပါပဲ သွား၊ လျှာ၊ သွားဖုံး၊ လည်ချောင်းကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးတယ်။ သွားကိုက်၊ သွားနာ၊ အနာပေါက်တာ၊ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးဖြစ်တာ၊လည်ချောင်းနာတာ၊ သွားနှုတ်ပြီးချိန်မှာ သွားဖုံးထဲ ပိုးမဝင်စေဖို့နဲ့ အနာကျက်မြန်စေဖို့ ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတတ်ကြပါတယ် ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းဖို့ သွားနဲ့ခံတွင်းဆရာဝန်တိုင်း ဘာလို့အကြံပြုတာလဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသလောက် နည်းသလို အိမ်တိုင်းမှာလည်း ဆားတွေ အလွယ်တကူဆောင်ထားတတ်ကြတာဆိုတော့ သုံးဖို့လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း နည်းတယ်။ လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ ပေးရတာကြောင့် ဆားငန်ရည်နဲ့ အမြဲပလုတ်ကျင်းဖို့ အကြံပြုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဆားငန်ရည်ဟာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုပေးနိုင်လဲ ၁။ ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သန့်စင်ပေးတယ်။ သွားတိုက်တံနဲ့ အလွယ်တကူ မရောက်နိုင်တဲ့ … Read more
Categories Hearth Tags ဆားငံရည်
ခုႏွစ္ရက္သားသမီး တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း 1.9.2020 မွ 31.9.2020အထိ
August 29, 2020 by Nalonetar Diary
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလထဲတွင်ကြုံတွေ့နေရသောပြသနာများအားချုပ်ကိုင်အနိုင်ယူစွမ်းရှိသောကာလဖြစ်သည်။မိမိလုပ်ဆောင်သမျှကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးမလိုက်လံကူညီတက်သည် ။ စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ် သက်ပြီး လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ ပြည်ပနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေး ကံမကောင်းသေးပါ။ ငွေအထွက်များခြင်း၊ ရစရာရှိတာမရခြင်း၊ ပေးစရာရှိတာ မပေးဖြစ်သေး ခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်းများ ကြုံရကိန်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့ချင် စိတ်များဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလိုလျှင် ဤလကုန် (2)ရက်နေ့ကျော်မှ ပြောင်းပါလေ။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာသား ချစ်သူရှိလျှင် အဆင်မပြေ ပျက်သွားတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်ရ၊ စကားများရတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များ အစဉ်ပြေမလိုလိုနှင့် အဆင်မပြေဘဲရှိနေတတ်ပါ သည်။ အင်တာဗျူးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စများ စီစဉ်ပြီး လုပ်ဖြစ်ရန် … Read more
Categories Horoscropes Tags တစ္လစာ
ကြမ္းၾကိဳက္တက္ရင္ ဒီအပြင္႔တံေလးေတြခူးျပီး အေျခာက္လွွန္းထားပါ
ကွမ်းစားတတ်သူများအတွက် ဆေးကောင်းတလက်မျှဝေပါရစေ ခုပုံမှာပြထားတဲ့အပင်လေးကဆင်နှာမောင်းပင်လေးပါ။ ခုခေတ်လူတော်တော်များများက ကွမ်းယာတွေကို 92.45 . ဆေးရွက်ကြီးအိန္ဒိယမှလာသော ကွမ်းစားဆေးအမျူးိမျိူးစားသုံး လာခြင်းကြောင့် ပါးစပ်အတွင်း ရေစီးကမ်းပြိုပါးစောင်နာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမှာဘဲ အဲဒီဆင်နှာမောင်းအပင်ကပွင့်တဲ့ ထိပ်ကဆင်နှာမောင်းနဲ့တူတဲ့ အပွင့်လေးကိုခူးပြီးနေပူပူမှာလှန်းပီး ဒယ်အိုးနဲ့လှော်ပါ။ ပြီးရင်မှုန့်ညှက်နေအောင်ထောင်းပီး ပါးစပ်ထဲမှာကွမ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့ ပါးပေါက်နာ ရေစီးကမ်းပြို ဖြစ်သောသွားဖုံးနဲ့ အနာဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တနေ့ ၄ကြိမ် ၅ ကြိမ်သိပ်ပေးပါ။ ကင်ဆာအဆင့်ထိမဖြစ်ဘဲပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ သွားနာ၊သွားကိုက်ရင်လဲ မာလကာရွက်ပြုတ်ရည်ငုံပီးထွေးလိုက်၊ ဒီဆေးမှုန့်လေးသိပ်လိုက်လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ MoeMyintSan Zawgyi ကြမ္းစားတတ္သူမ်ားအတြက္ ေဆးေကာင္းတလက္မွ်ေဝပါရေစ ခုပုံမွာျပထားတဲ့အပင္ေလးကဆင္ႏွာေမာင္းပင္ေလးပါ။ ခုေခတ္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြမ္းယာေတြကို 92.45 . ေဆး႐ြက္ႀကီးအိႏၵိယမွလာေသာ ကြမ္းစားေဆးအမ်ဴးိမ်ိဴးစားသုံး လာျခင္းေၾကာင့္ ပါးစပ္အတြင္း ေရစီးကမ္းၿပိဳပါးေစာင္နာေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာရင္ျဖစ္ျဖစ္ျခင္းမွာဘဲ အဲဒီဆင္ႏွာေမာင္းအပင္ကပြင့္တဲ့ ထိပ္ကဆင္ႏွာေမာင္းနဲ႔တူတဲ့ အပြင့္ေလးကိုခူးၿပီးေနပူပူမွာလွန္းပီး ဒယ္အိုးနဲ႔ေလွာ္ပါ။ ၿပီးရင္မႈန႔္ညႇက္ေနေအာင္ေထာင္းပီး ပါးစပ္ထဲမွာကြမ္းစားလို႔ျဖစ္တဲ့ … Read more
Categories Hearth Tags ကွမ်းစား
ေခတ္ကာလ အခက္အခဲၾကားက အက်ပ္အတည္းမ်ားတြက္ ဓါတ္ဆင္မယ္ ..
အကျပ်အတည်းများတွက် ဓါတ်ဆင်မယ်…. ဒီလိုခက်ခဲ ကျပ်တည်းလှတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ လူတိုင်းမှာ အခက်အခဲ အနည်းနှင့်အများ ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ လုပ်ငန်းထဲမှာ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများခြင်း ၊ ချေးထားသောငွေကြေးများ ပြန်လည်မရရှိခြင်း ၊ ချေးထားသော ငွေကြေးများပြန်လည် မဆပ်နိ်ုင်အောင် ဒုက္ခရောက်ခြင်း ၊ ငွေကြေးမချောင်လည်တော့ အိမ်တွင်းရေးတွေလည်း မသာယာချင်း ၊လုပ်ငန်းတွေလည်း အလွဲလွဲအချော်ချော်နှင့် ပြိုကွဲမလိုဖြစ်ချင်း စသော စသော အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို လူတိုင်းအိမ်တိုင်း ခံစားကြရပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲများတွက် အောက်ပါယတြာလေးကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ မိမိရဲ့ဓါတ်ပုံလေး တစ်ပုံကို ဓါတ်ဘူးထဲထည့်ပါ။ ပြီးတော့ မိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများကို စာရွက်ဖြူတရွက်မှာရေးပြီး ဆုတောင်းစာကို ဓါတ်ဘူးထဲ ထပ်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဓါတ်ဘူးလေးကို အဖုံးပိတ် ပြီး ၊အဖုံးအပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ထွန်းညှိပြီး ပူဇော်ပါ။ ၉ရက်တိတိ အချိန်မှန် … Read more
Categories Horoscropes Tags ဓါတ်ဆင်မယ်
ေခတ္ကာလ အခက္အခဲၾကားက အက်ပ္အတည္းမ်ားတြက္ ဓါတ္ဆင္မယ္
သားအိမ္အတြင္း အလုံးအက်ိတ္တို႕ ျဖစ္လွ်င္
သားအိမ်အတွင်း အလုံးအကျိတ်အတွက် သားအိမ်အတွင်းအလုံးအကျိတ်(ဆေးမြီးတို) မသိသေးသူများအတွက်ပါ။ သားအိမ်အတွင်း အကျိတ်ဖြစ်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဆေးစပ်ရပါမည်။ ၁။ တပင်တိုင်မြနန်းဥ ၅ ကျပ်သား ၂။ ရှားစောင်းလက်ပတ်၂၅ ကျပ်သား ၃။ထန်းလျက် ၁၀ ကျပ်သား ၄။ ရေ ၂၅ ကျပ်သား တို့ကိုရော၍ မီးနွေးနွေးဖြင့် ပျစ်အောင်ကျို ။ အအေးခံ ဟင်းစားဇွန်းဖြင့် တဇွန်း တရက် (၂)ကြိမ်သောက်ပါ။ တလခန့် သောက်ရမည်။ တပင်တိုင်မြနန်းအရွက်ဖြင့် အနာများအပေါ် ကပ်ထားပါက အကျက်မြန်ပြီးအသားနုတက် မြန်ပါသည်။ (တိုင်းရင်းဆေးမြီးတို) ကျန်းမာကြပါစေရှင် Kyaw Yimon ( HTD) Zawgyi သားအိမ္အတြင္း အလုံးအက်ိတ္အတြက္ သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္(ေဆးၿမီးတို) မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ။ သားအိမ္အတြင္း အက်ိတ္ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆးစပ္ရပါမည္။ ၁။ တပင္တိုင္ျမနန္းဥ … Read more
Categories Hearth Tags သားအိမ်အတွင်